Qaramada Midoobay oo markii ugu horeysay ka hadashay qabashadii Xassan Daahir Aweys.	| Salaan Media
Golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay ayaa waxa ay war kasoo saareen Xadhiga ninka xilliga dheer duur ku jirka ahaa ee Xassan Daahir Aweys kaas oo mudo maalma kooban gacanta ugu jira dowlada Soomaaliya.
“Waa wax lagu farxo waana arin wanaagsan. Waxaa la odhan karaa in ay tahay tilaabo dhanka wanaaga loo qaaday in Xassan Daahir Aweys uu gacanta dowlada Soomaaliya”, sidaas waxaa lagu yidhii war kasoo baxay Xafiiska war-faafinta ee Banki-moon.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ka aamusnaayeen arinta Xassan Daahir tan iyo markii uu gacanta dowlada Soomaaliya soo galay isaga oo baxsan ka ahaa kooxda Shabaab oo is-khilaaftay.
Xassan Daahir Aweys waxa uu ku jiraa liiska dadka sida aadka loo doon-doonayo ee Qaramada Midoobay, iyada oo loo haysto dhibaatooyin fara badan oo dalka Soomaaliya ka dhacay intuu uu kamid ahaa qolyaha dagaalka hubeysan ee lagu hoobtay.
Si kastaba, Xassan Daahir Aweys ayaa waxa uu kasoo baxsaday kooxda Shabaab waxa uuna si magangalya ahaan isugu dhiibay maamulka Xibin iyo Xeeb halkaas oo ugu danbeyntii looga dhaadhiciyay in Muqdisho la keeno inkasta oo uu xabsi galay wixii ka danbeeyay markii diyaaradii waday ay kasoo dagtay Muqdisho iyada oo arintiisa la sheegay in ay u fududaan karto hadba tilaabada uu qaato isagu.